स्व. मदन तामाङकी पत्नी भारती तामाङ अनि लक्ष्मण प्रधान गोर्खालीगबाट निलम्बितःयस्तो छ निकाल्नुको कारण – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsस्व. मदन तामाङकी पत्नी भारती तामाङ अनि लक्ष्मण प्रधान गोर्खालीगबाट निलम्बितःयस्तो छ निकाल्नुको कारण
स्व. मदन तामाङकी पत्नी भारती तामाङ अनि लक्ष्मण प्रधान गोर्खालीगबाट निलम्बितःयस्तो छ निकाल्नुको कारण
October 8, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, खबर, दार्जीलिङ, मुख्य समाचार 0
गोर्खालीग अध्यक्ष भारती तामाङलाई आज पार्टीबाट निलम्बित गरिएको छ। स्व.तामङकी पत्नी भारती तामाङले पार्टी विरूद्ध कार्य गरेको आरोपमा आज गोर्खालीग केन्द्रिय सिमितिले एक बैठकपछि उनलाई तीन महिनाको निम्ति पार्टीबाट निलम्बन गरेको घोषणा गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष भारती तामाङसितै गोर्खालीग पूर्व उपाध्यक्ष लक्ष्मण प्रधानलाई पनि पार्टीले 1 वर्षको निम्ति निलम्बित गरेको छ। यसरी नै तरूण गोर्खाका पृथ्विराज सुब्बा र विप्लव राईलाई पनि 1 वर्षको निम्ति पार्टीबाहिर गरिएको छ। कुनै पनि दलको अध्यक्षलाई नै पार्टीबाट निकालिएको घटना दार्जीलिङमा यो नौलो हो।
‘पार्टी विरूद्ध गरिएको कार्य अनि पार्टी फण्डको दुरुपयोग गरेकोमा उनीहरूलाई पार्टीबाट निलम्बित गरिएको हो’-लीग महासचिव प्रताप खातीले भने, ‘स्व. मदन तामाङको पार्टीप्रतिको योगदानको कदर गर्दै भारती तामाङलाई केवल तीन महिनाको निम्ति मात्र निलम्बित गरिएको छ।’
खातीका अनुसार पार्टीको सहमति नलिइ उनीहरू राज्य सरकारले बोलाएको 12 तारिखको सिलगढीको बैठकमा गएका थिए। यसबारे उनीहरूलाई 28 तारिखका दिन कारण बताउ नोटिस् पनि दिइएको थियो। आज पनि उनीहरूलाई बैठकमा बोलाइएको भएपनि लक्ष्मण प्रधान र भारती तामाङले उपस्थिति दिइएनन्। यद्यपि पृथ्विराज सुब्बा र विप्लव राई उपस्थित थिए। तर उनीहरूले पार्टीविरूद्ध गरेको क्रियाकलापबारे सही स्पष्टिकरण दिन नसकेपछि पार्टीले उनीहरूलाई निलम्बन गर्ने निर्णय लिइएको खातीले बताए।
गोर्खालीग उपाध्यक्ष एसके राई अनि कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राईको दुई सदस्यीय जाँच टोलीले उनीहरूलाई दोषी पाएपछि पार्टीबाट निलम्बन गरिएको हो। आज दार्जीलिङमा सम्पन्न गोर्खालीगको बैठकको अध्यक्षता गजेन्द्र रामुदामुले गरेका थिए जहाँ 18 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू उपस्थित थिए।
नाम्चीको चारधाम क्षेत्रमा विमल खोज्न छापाः रित्तो हात फर्कियो बङ्गाल सिआइडी
गोर्खाल्याण्ड जनआन्दोलन टेवा मञ्चले गऱ्यो जिटीएको विरोधः अराजनैतिक सङ्गठनलाई नै मञ्चले समर्थन गर्ने घोषणा